HALKAN KA AQRISO W/W MOGTIMES 15 APRIL 2021
Thursday April 15, 2021 - 09:32:33 in Wararka by Super Admin
Farmajao awood sharci ah ma u leeya hay darajo ka xayuubinta Saadaq Joon?
Madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu xeer madaxweyne darajadii ciidanka kaga xayuubiyey Taliyihii Booliska G/ Banaadir Sareeye Guuto Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon), sida lagu sheegay qoraal ay baahisay warbaahinta dowladda.
Madaxweyne Farmaa jo ayaa sidoo kale Saad aq Cumar ka xayuubiyay wixii xaquuq ah oo uu kula ciidanka Soomaaliya.
Xilka qaadista, daraja iyo xuquuq ka xayuub inta ayaa timid kadib markii uu Generaal Saad aq Joon sheegay in uu joojiyey kulankii Isniitii loo balansanaa ee Golaha Shacabka, kaas oo ajandihiisu ahaa ka doodista mooshin la xiriira doorashooyinka.
Haddaba Madaxweyne Farmaajo xil ka xayu ubin ma samayn karaa?
Golaha Midowga Musharixiinta iyo siyaasiy iinta Mucaaradka ah ayaa sheegay in aan ma daxweyne Farmaajo xil ka qaadis iyo magacaa bis samayn karin, maadaama uu dhamaaday, si da ay yiraahdeen mudo xileedkiisa sharciga ah oo ku ekaa Fabruary 8, 2021.
Senetar Abshir Maxamed Axmed, gudoomi ye ku xigeenka Aqalka Sare BFS ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan waddo sharci ah u marin tallaabada uu qaaday ee ka dhanka ah Saadaq, wuxuuna soo qaatay dhowrka qodob:-
"1.Taliyaha Ciidanka Boliiska waa in uu ma gacaabaa guddi anshax oo baara kiiska sarkaal ka (waxaa ku jirto in sarkaalka la dhageysto) ka na soo talo bixiya tallaabada laga qaadi karo.”
"2. Guddiga waa inuu ku jira ugu yaraan hal sarkaal sare iyo saraakiil kale.
3. Tallaabada ay soo jeediyaan ayaa loo gud binayaa Madaxwey naha si uu ugu soo saaro Xeer Madaxweyne. Haddii tallaabadaasi ay tah ay ka-saarista Cii danka, waa in uu soo jeediyaa Wasiirka Amniga Gudaha.”
"Sida ku cad Xeerka Ciqaabta Ciidamada Qalabka Sida qodobada 21aad, 22aad, 23aad iyo 24aad Sharci Lr.2 ee soo baxay 1963 waxaa sarkaal derajo ka qaadis ciidan, shaqo ka joojin ama laalid derajada lagu sameyn karaa marka maxkamadda ciidamada qalabka-sida ay ku caddeeyso danbi, xukunna ku dhaco.”
Sep 8, 2018, ayaa warqad uu ku saxiixay ma daxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa darajadii ciidan looga xayuubi yay Jeneraal Cabdalla Cabdalla oo horay u soo noqday taliye xigeenka hay’adda NISA.
Waqradaasi oo isla xilligaasi dhaqan gashay ayaa Cabdalla Cabdalla gabi ahaanba waxa loo ga saaray xubinimadiisa hay’adda NISA.
Madaxweynayaashii hore ee dalka, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ayaa kulan xasaasiya la lahaa madaxweynaha dowla dda Goboleedka HirShabeelle, Cali Guudlaawe oo kamid ah maamulada taabacsan madaxwey naha waqtigiisu dhamaaday Far ma ajo. Sida ay xogta ku helayso Caasimada On line, kulan kaan ayaa waxaa labada madaxw eyne ku wehl inaya Xildhibaan Cabdulqaadir Co soble oo ka mid ah hoggaanka sare ee Madasha Xisbiyada Qaran, waxayna madaxweyne Guud laawe kala hadlayaan go’aankii uu ku taageeray qaraarkii uu Golaha Shacabka muddo kororsiga ugu sa meeyay hay’addaha dowladda.
Go’aanka Cali Guudlaawe kula saftay Farmaajo ayaa ka careysiiyay madaxdaas ay is ku haybta yihiin oo ah Mush araxiin iyo Madax hore, iyadoo xusid mudan tah ay in madaxdan horay u taageereen doo rasha diisa oo aanay ka hor imaan.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud iyo Sh.Shariif ayaa si weyn usoo dhaweeyay doorashadii khilaafka ba dan ka dha shay ee uu ku soo baxay madaxwey ne Guudl aawe, wuxuuna intaas kadib kamid no qday ma amulada sida weyn u taabacsan madax weyna ha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo.
Sida ay ogaataay Caasimada Online, mad axdaan ayaa la wadaagay Cali Guudlaawe niy ad jabkooda ku aadan go’aankii la sheegay inuu ku taageeray muddo kororsiga Farmaajo, waxa yna ku cadaadinayaan inuu ka laabto.
Kulankan ayaa loo arkaa fursadii ugu damb eeysay ee ay Madaxdii hore uga quusana yaan ama isku fahmayaan madaxweyne Cali Guudl aawe, iyadoo la kala ogaan doono midka uu dooran doono.
Kulankaan ayaa daba socda midkii ay Ha been hore la yeesheen Musharaxiinta mucaarid ka ah mad axweynaha Galmudug, Axmed Qoor-Qoor, ka asi oo uu ku bayaamiyay inuusan qeyb ka ah eyn taageerada loo muujinayo muddo kor orsiga Farmaajo, islamarkaana ay tahay inay Guudlaawe lasoo hadlaan, si kulamo kala la Is kugu iamado.
Si kastaba, xaalada siyaasadeed ee dalka ay aa kasii dareysa, tan iyo markii uu Golaha Shac abka soo saaray qaraarkii uu muddo kororsiga u gu sameeyay madaxda sarre ee dalka, waxaa na isasoo taraya hanjabaadaha ku aadan go’a ankaasi ee ay soo saarayaan dalalka beesha caalamka. Xigasho:-casimadda.net
Xiisad ka jirta Xalay qeybo ka mid ah Maga alada Muqdisho
Waxaa sii xoogeysanaya xiisad ka jirta xaaf ado ka mid ah M/Muqdisho gaar ahaan deg ma da Hodon kadib markii uu xarun deegaan ka sa meystey Taliyihii hore ee Ciidanka Booliska G/ Banaadir Jeneraal Saadaq Cumar Maxamed (Saadaq John).
Saadaq Joon ayaa xarun deegaan ka dhigt ay xaafadda Shiikole oo ku dhow xarunta ciida mada xoogga dalka Soom aaliyeed ee degmada Dey niile.
Ciidamada Haramcad ayaa sidoo kale waxaa la geeyay isgoysyada laga galo xaafada Shiirkole, wa xaana jirta cabsi laga qabo in halkaa uu iska hor imaad ka dhaco. Madaxweynaha mudo xileedku ka dhamaad ay ee Farmaajo ayaa Habeen hore darajadii sarkaalni mo iyo dhamaan waxii xuquuq ciidan ahaa ka xayuubiyey Jeneraal Sa adaq Joon. Saadaq Joon ayaa helaya haatan taageero ay u muujinayaan dadka uu ka soo jee do wax aana baaq ka soo saaray Xildhibaan C/r axmaan Odowaa oo hore u soo noqday wasiirka arrima ha gudaha dowlada federalka.
Xildhibaan Odowaa ayaa ugu baaqay Dad ka uu ku matalo kursiga inay difaacaan Jeneraal Saadaq John oo Xalay xarun deegaan ka dhig tay Shiirkole, kaddib markii Ciidamo fara badan ay dowladdu dul geysay halka uu degay Jener aalka. Xigasho:jowhar.com
Jarmalka ayaa sheegay in qaraarka lagu an sixiyay muddo kordhinta hay’adaha dowladda Soomaaliya uu yahay go’ aan halis ku ah amniga iyo xasiloonida dalka.
Waxay ugu baaqeen mada xda Soomaaliya inay dib ugu laabtaan miiska wadahadalka si heshiis looga gaaro khilaafka harreeyay hannaanka doorashada ee Soomaa liya.
Horay dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo midowga Yurub ayaa kasoo horjeestay muddo kordhinta ay sameeyeen Golaha Shacabka, iya ga oo Madaxda dowladda ugu hanjabay inay cu naqabateyn saari doonaan.
Somaliland Oo Walaac Ka Muujisay Xaalad da Siyaasadeed Ee Soomaaliya
Somaliland ayaa war kasoo saartay xaalad da siyaasadeed ee Soomaa liya , waxaana ay walaac ka muujisay khilaaf ka hadda ka dhex taagan dawladda iyo muc aaridka. "Ismari-waagga siy aas addeed ee Shalay jira wuxuu caddeyn u yahay du lmiga, iyo hoggaaminta macangagga ah ee Tal iska Far maajo, oo khatar buuxda ku ah amn iga iyo xas iloonida gobolka taasi oo soortogal ah in ay Soomaaliya geliso dagaal sokeeye oo hor leh oo laga yaabo in lagu qasbo kumannaan shacab ah inay u barakacaan dalalka deriska ah oo ay ku jirto Jamhuuriyadda Somaliland” ayaa la gu yiri Qoraal kasoo baxay W/Arrimaha Dibed da Somaliland
Xiisad Xalay laga dareemayo Muqdisho iyo shir u socda Rooble iyo Qoor Qoor
Shir u dhaxeeya R/W.XFS ee xil-gaarsiinta ah Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweyna ha Galmudug Axmed Qoor Qoor ayaa Xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya.
Shirkaan ayaa ku soo aadaya iyadoo Xalay M. Muqdisho laga dareema yo dhaq dhaqaaqyo ciid an oo xoog leh iyo cabsi dagaal, waana taas arrinta uu Qoor Qoor kala hadlayo R/wasaare Rooble.
Taliyihii hore ee Ciidanka Booliska G/ Ban aadir Jeneraal Saadaq Cumar Maxamed (Saad aq John) ayaa xarun deegaan ka dhigtay qeybo ka tirsan xaafadda Shiikole ee degmada Deyn iile, waxuuna wataa ciidamo daacad u ah iyo ga adiid dagaal.
Sidoo kale qeybo ka tirsan waddada 30-ka, gaar ahaan isgoysyada Balaksii iyo Baar-ubax oo aad ugu dhaw isgoyska Shiirkole ayaa Xalay la soo dhoobay ciidamo ka tirsan booliska gaark a ah ee Haramcad.
Shiirkole ayaa ka tirsan xaafadda Oodwey ne ee degmada Deyniile, taas oo inteeda badan ay deganyihiin beesha uu ka dhashay Saadaq Joon, waxaa soo baxaya cabsi xoog leh oo laga qabo in madaxda waqtigu ka dhamaaday ee DFS gaar ahaan madaxweyne Farmaajo uu am rro weerar ka dhan ah Saadaq Joon iyo cii damada uu wato.
Haddii ay dowladdu ku dhiirato inay weerarto Saadaq Joon waxay dad badan qabaan inay bil aaw u noqon karto qalalaase aan la fududeysan karin oo ka qarxa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Madaxweynaha mudo xileedku ka dhamaa day ee Farmaajo ayaa Habeen hore darajadii sa rkaalnimo iyo dhamaan waxii xuquuq ciidan ah aa ka xayuubiyey Jeneraal Saadaq Joon.
S/Guud Saadaq Joon oo lagu tirin jiray saraa kiisha ugu dhaw madaxweyne Farmaajo ayaa maalin ka hor Muqdisho ka sheegay inuu hor is taagay kulan ay xildhibaanada waqtigu ka dham aaday ee G/Shacabka muddada ugu kordhinay aan hey’adaha dowladda federaalka. Hase yee shee daqiiqado gudahood markii uu kasoo yeer ay hadalkaas ayaa xilkii laga qaaday, waxaana qabsoomay kulankii uu hor istaagay ee G/ sha cabka, iyadoo uu dhacay mudo kororsigii uu ka digay Xigasho:caasimadda.net
Ingiriiska Oo Kasoo Horjeeystay Muddo Kororsiga Ay Sameeyeen Golaha Shacabka
D/Ingiriiska oo kamid ah Dowladdaha taa geera Soomaaliya ayaa si kulul uga hor timid Go’aankii 2maalin ka hor ay Xildhibaanada G/Shacabka ee waqtigoodu dhammaaday muddo kordhin ta ugu sameeyeen Hay’adda ha dowladda iyo Farmaajo.
W/Arrimaha Afrika ee UK Ja mes Duddridge ayaa waxaa uu sheegay inay ka xun yihiin tallaabada muddo kordhinta 2da san no ee Xildhibaanada ugu sameeyeen hay’adda ha iyo Madaxweynaha waqtiga ka idlaaday ee Farmaajo.
Wasiir James Duddridge oo bayaan soo saa ray ayaa waxaa ku sheegay inay ka naxeen mar kii ay maqleen muddo kororsiga lagu dhaqaaqay, isla markaana uu go’aankaas yah ay tallaabo hoos u dhigeysa kalsoonida lagu qabo hoggaaminta Soomaaliya.
Wasiirka James Duddridge ayaa ugu baaq ay hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay si degd eg ugu laabtaan wada hadallada, si xal buuxa lo oga gaaro khilaafka hareeyay qabsoomida doo rashooyinka dhacaya.
"Maaddaama uusan jirin is-afgarad horseed aya doorasho loo wada dhan yahay oo lagu kals oonaan karo in la qabto iyada oo aan dib loo dhi gin, xiriirka bulshada caalamka iyo hoggaanka Soomaaliya ayaa is beddelaya, UK waxay lash aqeyn doontaa saaxiibadeeda caalamiga ah qa ab mideysan oo dib loogu qiimeeyo xiriirkeena iyo nooca caawinaada aan siino Soomaaliya” ayuu yiri Wasiika.
Si kastaba Madaxweynaha muddo xileedkii sa dhammaaday Farmaajo ayaa Habe en hore saxiixay sharciga gaarka ah ee Jiheynta doora shooyinka heer Federaal, kaasi oo sheegaya in dalku aaday doorasho qof iyo Cod ah, lana sameeyay muddo kordhin laba sanno ah.
Wararka ka imanaya M/Balcad ayaa sheega ya in gaari bas ah oo ka soo tegey M. Muqdisho kuna sii jeeday M/Jowhar ay miino kula qaraxd ay meel ku dhow deegaanka Gololey ee degm ada Balcad.
Qaraxa ayaa sababay kha saaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, sida darawalka gaa riga sheegay waxaa saarnaa in ka badan 20-qof, waxaana geeriyooday 19 halka 4 kalana ay dhaawacm een.
Gurmad xoog leh ayaa gaaray goobta uu qa raxu ka dhacay halkaa oo laga qaaday dhaaw acii halka meydadkana laga soo ururiyay.
Beesha Caalamka oo War-Saxaafadeed ka soo saartay Muddo Korosiga Madaxweyn aha iyo Golaha Shacabka
Howlgalka M/Afrika ee Soomaaliya (AMIS OM), Kanada, Danmark, M/Yurub (EU), Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urur-Goboleedka IGAD, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Spain,
Sweden, Switzerland, Boqortooyada Ingiriis ka, Mareykanka, iyo Q/Midoobay waxay aad u ga walaacsanyihiin meelmarinta 12kii Abriil uu G/Shacabka meelmariyay qaraar lagu bedelayo heshiiskii 17kii Sebtember, qaraarkaas oo xam baarsan geedi-socod doorasho oo ay ka dhalan doonto muddo kordhin dheeri ah oo ku timaad da muddo xileedkii loo igmaday Madaxweynaha iyo Baarlamaanka.
Waxaan si isdaba joog ah u sheegnay in aan la taageeri doonin geeddi-socod siyaasadeed oo is barbar socda, doorashooyin aan loo dham ayn, ama dadaallo cusub oo keenaya kordhinta muddo xileedkii hore.
Qaraarka 12kii Abriil wuxuu wiiqayaa nabad da, amniga, iyo xasilloonida Soomaaliya iyo me elo ka baxsan. Qaraarkan ayaa sidoo kale sii daahin doona qabashada doorashooyin lagu ka lsoonaan karo kuwaas oo ay sugayeen dadka Soomaaliyeed. Waxaan ku qanacsannahay in hi rgelinta heshiiskii 17kii Sebtember uu yahay han aanka ugu wanaagsan ee waxqabad ee la heli karo sidaa darteed, waxaan ku boorinaynaa ma daxda DF iyo D/Goboleedyada Xubnaha ka ah DFS inay si dhakhso leh ugu soo laabtaan wad ahadallada si loogu heshiiyo habka hawsha ho rey loogusii wedi lahaa.
Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan dhinac yada inay aad isu xakameeyaan, ayna sii wad aan wadahadalka, iskana ilaaliyaan ficillada hal ka dhinac ah ee kicin kara xiisadaha. Waxaan di yaar u nahay inaan bixinno adeegyada dhex dhexaadinta si loo fududeeyo loona soo noole eyo wadahadal loo dhan yahay oo ku saleysan heshiiskii 17kii Sebtember.
Cabdiraxmaan C/ Shakuur oo sheegay in dalku galay xaalad hoggaamiye Kooxeed nimo
Siyaasig Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Wa rsame ahne G/Xisbiga Waradajir oo ka hadlay xaalada dalka uu marayo ayaa sheegay in wad anku uu galay waji hugaamiye kooxeednimo, isaga oo madaxweynaha waqtigiisu idlaaday ku eedeyay in uu jabinayo sharciga iyo xeerka dalka u yaala.
Waxaa warbaahinta shir jara a’id ugu qabtay Shalay M/Muqd isho isaga oo sheegay inay halis galineyso haddii farmaajo la aqoo nsado waxii la soo tabcayay 20kii sano ee la soo dhaafay, waxaa kale oo uu daa ha qaaday in xiriir hoose uu Ereteritya kala dha xeeyo Farmaajo, taasi oo kala geyneysa sooma aliya iyo beesha caalamka.
Dhanka kale CC/Shakuur ayaa sheegay in uu M.Muqdisho ka soo fuqsaday boorarkiisii Mu sharaxnimo,waxaana uu ku micneeyay in doora sho iyo musharaxnimo aysan jirin.
Waxaa uu dhaliil u soo jeediyay Maamul Gob oleeedyada taageeray sharcigii ay meel mariye en baarlamaanka soomaaliya, madaxweynaha waqtigiisu dhamaadayne uu saxixay, waxaana uu sheegay in ay ku shaqeeyaan amarka dowla da dhexe.
Beesha caalamka ayaa dhaleeceysay go’a ankii ay Golaha Shacabka Soomaaliya muddo 2 sano ah ugu kordhiyeen dowladda Soomaaliya, M/Yurub, Mareykanka iyo UK ayaa ka digay ca waaqib xumada ka dhalan karta go’aankan.
Wakiilka M/Yurub ee Soomaaliya ayaa ku ba aqay in wadahadalada dib loogu soo laabto lana qabto doorasho iyada oo lagu saleynayo heshiis kii 17 September.Xigasho:radiodalsan.com
Dowladda Soomaaliya oo si adag u jawaab tay Beesha Caalamka (Akhris)
War saxaafadeed ka soo baxay D/Soomaal iya ayaa si adag loogu jawaabay Qoraaladii
ka soo yeeray Beesha Calaa mka, ka dib markii Mareykanka, UK, iyo dalal kale ay u goodiy een madaxda DF.
DF/Soomaaliya waxay si aad ah uga xumaat ay inay aragto hadallada bulshada ee qaar ka mid ah saaxiibbadeeda caalamiga ah iyo saaxii bbada muddada dheer ay ku marin habaabina yaan sharciyada ay soo saaraan hay’adaha do wladda ee lagu ilaalinayo xuquuqda dimoqraad iyadda ee shacabka ee ay ku dooranayaan hog gaankooda.
Dadka Soomaaliyeed waxay u oomanaayeen fursad ay ku gutaan xuquuqdooda dimoqraadiy adeed oo ay ugu adeegsadaan awoodda codko oda doorashada hoggaamiyeyaashooda. In ka sta oo maamulkani dadaal badan ku bixiyay himiladan, Sebtember 17th, 2020, hoggaamiyey aasha siyaasadeed ee Soomaaliya waxay isku raaceen in la joojiyo hannaankaas oo la qabto doorasho dadban taa beddelkeeda.
Sida ay dhammaantood goobjoog u ahaay een sagaalkii bilood ee la soo dhaafay, labo ka mid ah toddobadii saxiixayaasha heshiiska 17 Sebtember 2020, oo kala ah hoggaamiyeyaa sha maamulada Jubbaland iyo Puntland, iyagoo ku dhaqmaya cadaadis ba’an oo kaga imanaya saameynta shisheeye, waxay isku dayeen inay hakiyaan oo afduubtaan howsha iyagoo abuura ya dalab aan dhammaad lahayn iyo iyagoo ku baaqaya in la burburiyo hay’adaha dowliga ah ee qaranka.
Khataraha ka dhalan kara luminta horumar ka la sameeyay ilaa iyo hadda waxay ku kallif tay G/Shacabka ee BFS inuu ka doodo oo u co deeyo 12-ka Abriil 2021-ka si loo ilaaliyo hay’a daha dalka. Go’aankan waxaa si ballaaran u taa geeray daneeyayaasha muhiimka ah ee siyaasa dda dalka, oo ay ku jiraan DF, Maamulka G/Ban aadir iyo 3 ka mid ah shanta D/goboleed ee xu bnaha ka ah Federaalka, kuwaas oo kala ah Hi rshabeele, Galmudug iyo D/goboleedka K/gal beed. Sida ku cad qodobka 47aad ee dastuurka KMG ah ee Soomaaliya, G/Shacabka ee BFS wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro sharci yo gaar ah oo qeexaya xeerarka khuseeya doo rashooyinka heer federaal.
Sidaa darteed, sharciga uu soo ansixiyay G/ Shacabka ee BF 12-kii Abriil 2021 oo dhigaya in hal qof, hal-cod doorasho lagu hirgeliyo dalka ayaa meesha ka saaraya qorshe kasta oo horay loo gaaray, oo uu ku jiro heshiiskii 17-kii Sebt ember 2020. Asal ahaan, sharcigani wuxuu dal ka siinayaa fursad ay ku fuliyaan mid ka mid ah xulashooyinka ay soo jeediyeen Guddiga Mad axa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka (NI EC), oo horay u soo saaray dhowr fursadood oo la fulin karo, oo ay ku jiraan khariidad lagu dha meystirayo dorashooyinka 13 bilood gudahood.
Hadalada xanafta leh ee ay ku raran yihiin hanjabaadaha, ee wax u dhimaya madaxbanaa nida siyaasadeed iyo xuquuqda madaxbanaan ee hay’adaha qaranka, waxay kaliya u adeegi doonaan dhiiragelinta ururada argagixisada iyo kuwa nabad diidka ah ee Soomaaliya.
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Xaaaladda Muq disho Iyo Laamaha Amniga Oo Farriin Diray
Laamaha amniga G/Banaadir ayaa farriin ad ag u diray shakhsiyaad la sheegay inay ku how lan yihiin kicin dadweyne iyo tallabooyin u muuq da inay sababi karaan dagaal sokooye oo Mu qdisho ka qarxa.
Guddoomiye Kuxegeenka Amniga iyo Siyaas adda G/Banaadir Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare ) oo warbahinta la hadlay ayaa farriin amni ga ku aaddan la wadaagay Shacabka Soomaali yeed, waxaana uu si gaar ah uga hadlay warar tan iyo xalay la isla dhex-marayay oo ahaa in DFS ay doonayso inay weerar ku qaaddo Tali yihii hore Booliska G/Banaadir Saadaq John, ka asi oo dhawaan laga qaaday xilka.